सर्लाही : 'स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न स्वास्थ्यकर्मी घरदैलोमै ' - Demo Khabar
सर्लाही : 'स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न स्वास्थ्यकर्मी घरदैलोमै '
सर्लाही, जेठ । सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–६, मा गरिब र सुकुम्वासी बस्तीका वासिन्दाको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न घरदैलोमै स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिएको छ । स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट टाढा रहेका विपन्न परिवारको बसोवास रहेको बस्तीमा वडा कार्यालयले वुधवारदेखि स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरेको हो ।
ज्वरो, रुघाखोकीलगायतका स्वास्थ्य समस्याबाट ग्रसित वडावासीलाई घर घरमै पुगेर निःशुल्क उपचार र औषधि वितरण गर्न सुरु गरिएको वडाध्यक्ष उज्वलकुमार कार्कीले जानकारी दिएका छन । वुधवार पहिलो दिन ५० भन्दा बढी घरधुरीमा घरदैलो गरेर स्वास्थ्य अवस्था बुझ्ने काम गरिएको वडाध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए ।
‘आर्थिक अभावमा उपचारबाट बञ्चित गरिब तथा सुकुम्वासी परिवारलाई लक्षित गरी बस्तीमै स्वास्थ्यकर्मी खटाएका हौँ’, वडाध्यक्ष कार्कीले भने,‘ घरदैलोबाट सबै वडावासी स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा आउनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।’
पहिलो दिन वडा कार्यालयबाट खटाइएको स्वास्थ्यकर्मीले घरदैलो गर्दा समुदायस्तरमा ज्वरोको प्रकोप विस्तारै कम हुँदै गएको पाइएको वडाध्यक्ष कार्कीले बताए । अहिले तीनजना मात्रै ज्वरोबाट ग्रसित भएको र बाँकी धेरै २०÷२५ दिनसम्म बिरामी परेर तङ्ग्रिसकेको पाइएको वडाध्यक्ष कार्कीले बताएका छन ।
घरदैलोको क्रममा अधिकांश बिरामी वडा स्वास्थ्य चौकीमा नआई निजी क्लिनिकमै धाउने गरेको पाइएको स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन् । त्यस्ता व्यक्तिलाई सामान्य बिरामी हुँदा महँगो शुल्क तिरेर निजी क्लिनिकमा नगई वडा स्वास्थ्य चौकीमा आउन आग्रह गरिएको वडाध्यक्ष कार्कीले बताए ।
लालबन्दीमा यसअघि वडा नं. ५ ले समेत घर घरमै स्वास्थ्यकर्मी पठाएर वडावासीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्ने काम गरेको थियो । यस्तै, वडा नं. १५ र १६ ले समेत बस्तीमै पुगेर वडावासीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्दै कोरोना परीक्षण गर्ने काम गरिरहेका छन् ।
बिहिवार, जेठ २७ २०७८०२:२९:३०
काठमाडौं उपत्यका : ५२८ संक्रमित थपिए